Sintomy ny fonosana manan-tantara Concorde v2 FSX & P3D - Freeware
Ity ny kinova 2 an'ny Concorde Historical Pack, ny kinova 1 dia mbola azo jerena eto. Ity fonosana ity dia misy ny atiny manan-tantara rehetra nanomboka ny taona 1971 ka hatramin'ny 2003, izany hoe ny atiny 15 feno pitsopitsony. Ny zava-baovao amin'ity fonosana ity dia ny fampidirana tontonana vaovao feno antsipiriany sy azo tanterahina miaraka amin'ny fandrefesana vaovao 100% ao amin'ny kokotrana virtoaly sy ny Panel 2D. Misy koa ny effet effetter afterburner ary boky torolàlana ho an'ny mpampiasa tsy maintsy vakianao. Misaotra betsaka anao Gavin Munro noho izy namorona manontolo an'ity tontonana ity ary koa ny fandrefesana XML rehetra natokana ho an'i Concorde.
Ny tontonana vaovao dia saika miankina tanteraka amin'ny fampahalalana hita ao amin'ny www.nitehawk.com. Ity tranonkala ity dia misy fampahalalana ara-teknika feno momba ny Concorde ary, raha azo atao, ny refy rehetra amin'ity maodely ity dia miasa araka ny voalaza eto amin'ity tranonkala ity. Raha misy ny fiviliana amin'ireto famaritana ireto dia aseho ao amin'ny boky izany.
Ny fandrefesana tsirairay ao amin'ity takelaka ity dia mahitsy, fa ny fahamaroana sy ny hakitroky ny refy dia mahatonga azy ho takelaka sarotra takarina. Ny rafitra fitantanana solika izay mitana ny ankamaroan'ny tontolon'ny injenieran'ny sidina dia sarotra indrindra, ary atolotra anao ny hamaky ny toko amin'ny antsipiriany ao aorian'ny boky.
Ny tontonana dia novolavolaina tamin'ny FSX Fanafainganana sy natao manodidina ny maodely novolavolain'i Libardo Guzman. Ny asa nataon'i Philippe Wallaert dia nanome aingam-panahy an'ity tontonana ity, saingy tsy misy na inona na inona fandrefesana mifototra amin'ny asany.
Ny tontonana dia natao ho an'ny mpanara-maso 1920X1080, saingy satria ny fandrefesana dia avo famaritana avo dia tokony handeha tsara amin'ny efijery lehibe kokoa satria ny tena vahaolana dia manodidina ny roa heny izay tokony hanome vahaolana tsara amin'ny monitor 3840X2160.
Coulpit virtoaly (VC)
Ny VC amin'ity tontonana ity dia miasa tanteraka amin'ny fomba mitovy amin'ny tontonana 2D afa-tsy ny tontolon'ny injenieran'ny sidina dia tsy mandeha amin'ny VC. Ny boky torolàlana dia manondro ny tontonana 2D, fa ny zavatra rehetra dia mitovy amin'ny VC. Mariho fa raha manana olana amin'ny famakiana ireo gauge eo amin'ny tontonana 2D ianao dia hovakiana bebe kokoa amin'ny VC.
Lisitry ny livery
Seranam-piaramanidina Concorde '79
Concorde PreProduction 1971
Navoaka tamin'ny 01 / 04 / 2021: Nisy mpampiasa iray naneho hevitra fa manondro lalana diso ny HSI. Manitsy izany ny fanavaozana.
Downloads 6 993
Modely amin'ny fiaramanidina: Libardo Guzman Garcia. teratany FSX/P3D fiovam-po avy amin'i Rikoooo. FSX/P3D Panel Concorde avy amin'i Gavin Munro. Repaints avy amin'i Eduardo Rocha. Feo nataon'i Adam Murphy